As the Lady Wishes - Vakio ny Manhwa, Manhua, Webtoon, Webcomics, Manga, Comics an-tserasera
Araka ny fanirian'ilay Ramatoa
Araka ny fanirian'ilay Ramatoa Average 4.2 / 5 avy amin'ny 29
N / A, manana fomba fijery 23.3K
Manhwa, ara-tsaina, Romance, Shoujo
Vakiana ianao Araka ny fanirian'ilay Ramatoa, mahafinaritra manhwa.
Hyun Eun Suh, taona 7. Nokarakarain'ny tale jeneraliny Cha Deok Man, izay nihevitra ny raibeny ho mpanampy be. 15 taona taty aoriana, nianjera i CEO Cha rehefa narary, ary naniry ny hanambadiany ny iray amin'ireo zafikeliny lahy ?!
Miankina amin'i Eun-Suh izay tiana mihoatra noho ny taranan'ny CEO Cha ny hoavin'ilay kaominaly! Nandritra io fotoana io, Cha Jin Ha izay sahala amin'ny zokiny tena izy dia nandefa fanambarana lehibe?
“Reny, mbola mandinika izay tianao hovadiana ve ianao? Mazava ho azy fa mila manambady ahy ianao. ”
Lehilahy iray izay tena karakarainy indrindra eto amin'izao tontolo izao nefa misy olona tsy mahatakatra azy intsony, afaka matoky azy ve izy?
Chapter 58	Novambra 15, 2021
Chapter 56	Oktobra 25, 2021
Chapter 55	Oktobra 23, 2021
Chapter 53	Oktobra 16, 2021
Chapter 52	Septambra 30, 2021
Chapter 51	Septambra 25, 2021
Chapter 50	Septambra 18, 2021
Chapter 49	Septambra 9, 2021
Chapter 48	Aogositra 30, 2021
Chapter 46	Aogositra 17, 2021
Chapter 45	Aogositra 10, 2021
Chapter 44	Aogositra 6, 2021
Chapter 43	Jolay 28, 2021
Chapter 42	Jolay 19, 2021
Chapter 41	Jolay 12, 2021
Chapter 40	Jolay 7, 2021
Chapter 39	Jolay 2, 2021
Chapter 38	Jona 22, 2021
Chapter 36	Jona 7, 2021
Chapter 35	Enga anie 31, 2021
Chapter 34	Enga anie 31, 2021
Chapter 32	Enga anie 9, 2021
Chapter 31	Enga anie 2, 2021
Chapter 30	Aprily 25, 2021
Chapter 29	Aprily 19, 2021
Chapter 27	Aprily 12, 2021
Chapter 26	March 28, 2021
Chapter 22	Febroary 28, 2021
Chapter 21	Febroary 21, 2021
Chapter 20	Febroary 14, 2021
Chapter 19	Febroary 8, 2021
Chapter 18	Febroary 1, 2021
Chapter 17	Janoary 26, 2021
Chapter 16	Janoary 18, 2021
Chapter 15	Janoary 8, 2021
Chapter 14	Desambra 25, 2020
Chapter 13	Desambra 25, 2020
Chapter 12	Desambra 16, 2020
Chapter 11	Desambra 16, 2020
Chapter 6	Desambra 2, 2020
Chapter 5	Desambra 2, 2020
Chapter 3	Oktobra 28, 2020
Chapter 2	Oktobra 28, 2020
Chapter 1	Oktobra 24, 2020
Devoly amin'ny alina
Fitiavana eo anelanelanareo sy izaho
Vavy fatme vita: Vady nahafaty ny filoha